Tiraab-curinta Toolmoon: Qoraallo Gaagaaban(2) - WardheerNews
Tiraab-curinta Toolmoon: Qoraallo Gaagaaban(2)
M A A N K A
MAANKA bani’aadmiga lama soo taaban karo salkiisa. Muggiisa lama qiyaasi karo. Wax walba inuu ka faalloodo ayuu isku dayaa. Cucubka wuu ku curyaamaa. Cabsida iyo abhinta wuu ku naafoobaa. Is-dhiibidda wuu ku hagaasaa. Marna se ma joojiyo baadigoobka uu u heellan yahay.
Safar iyo sahan joogtaysan ayuu ku jiraa. Soohdin baacin kartaana ma ay jirto. Kumanyaal sano oo la soo dhaafay, ayuu run ka jirtey baaraa, oo ka niib keenaa habkii, qalabkii iyo waayihii xilligaas fog lagu noolaan jirey.
Kumanyaal sano oo soo socda, ayuu sii oddorosaa dhacdooyinka iman doona yaabka iyo cajaaiibka ay leeyihiin. Falagga korkeenna meeraya ayuu fiiriyaa, faaqidaa intuu ka kooban yahay- tiradooda, kala fogaantooda, weynaantooda, cimiladooda kala duwan, oo fallaara xiimaya ku sahmiyaa intaan loo guurin.
Dhulka hoosteenna goglan, ayuu qaradiisa weyn hoos u quusaa, oo uur-ku-jirtiisa daalacdaa una kala soocaa.. siigo.. ciid.. dhoobo.. dhadhaab.. biyo.. gaas.. betrool.. dheeman.. iyo malyuun shey oo weli isku moordhaysan.
Misna maskaxda madaxiisa yar ku jirta, waxaa lagu tilmaamaa inta uu tan iyo haatan ka isticmaalay waxay ku aadaysaa wax irbad caaradeed le’eg marka loo eego inta weli u dihin. Miyay markaa la yaab leedahay inu qofku haweysto inu boqortooyadiisa kawnka ku simo. KII IS-DABRAAYA YEELKADIISA !!
Shaqadu waa sharaf. “Nimaan shaqaysan shaah waa ka xaaraan.” Waa maahmaah soomaaliyeed oo murtideeda laysla wada qirsan yahay. Intee baase ku dhaqanta oo ku camal fasha? Kolleyba tiro aan yarayn baan dhegta jalaq u siin.
Shaqa la’aanta iyo cudurku waa mataano walaala ah oo markay isu tagaan ay ka dhalato cillado fara badan ay ka mid yihii: caajiska, cagajiidka beenta, xanta dhabcaalnimada, fulaynimada quusta, caalwaanimada xatooyada, eexda wax-sheegsheegga, diradiraha iyo qaar kaloo badan aan halkan lagu soo wada magac dhebi karayn imminka.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee London maxkamadaha lasoo taago, ama xarig lagu xukumay jeelasha lasoo jiifa, markaad u fiirsatid dembiyada lagusoo oogayo ee ay galeen inta badan inay shaqa-la’aantu si weyn uga dambayso ayaa kuu caddaanaysa. Sidoo kale, iyana kuwa tireenka isu dhiga ama webiga isku tuura ama siyaale kale isu dila ee isu deldela, iyana waxaad arki kartaa in qulubka ku dhacay iyo mugdiga adduunka kaga habsadey ee naftooda iyo nolosha nacsiiyey, si kasta ha lagu fasiree ay kolleyba shaqa-la’aani u wehelisey.
Muranka, is-afgaranwaaga, iyo is-qabadka qoysaska ku dhaca iyagana boqolkiiba sagaashan waxaa si weyn loogu aanaynayaa shaqa-la’aan odaygii guriga haleeshay oo cidla’ ku curyaamisay.
Wiilka shaqaysta, wiilka tababarka qaata, iyo wiilka waxbarashada ku fooggan waxay hawlahooda ka kasbadaan yuhuun aad u sarraysa oo cillado badan ka baajisa.
Maskax fiyaw, jidh caafimaad qaba..yuhuun wacan, rajaqab fiican, Runlawnimo, deeqsinimo, dulqaad, dad la dhaqan suubban, dabcisami, degganaan iyo in badan oo kale oo la bah-wadaag ah waxaa wada kaba idil ahaantood oo micnahaa lagu diirsado u yeelaa waa shaqada. Hadda shaqa kasta ma aha ee waa tan xalaasha ah, xariirta ah ee xaqa ku dhisan.
Hadal iyo dan,Shaqadu waa nolol, Shaqadu waa sharaf, Shaqa-la’aantuna waa nolol-la’aan. Waana sharaf la’aan.